Imincintiswano yezincwadi ka-Ephreli eSpain | Izincwadi Zamanje
Imincintiswano yezincwadi ka-Ephreli eSpain
UCarmen Guillen | | Imincintiswano Nemiklomelo, Literatura
Kulabo kini abahlale befuna imincintiswano yezincwadi abazofaka kuyo imisebenzi yabo, ngikulethela le ndatshana emayelana nemincintiswano yezincwadi ka-Ephreli eSpain.
Ngiyethemba uzothola oyidingayo, futhi sikufisela inhlanhla!
1 Umklomelo Wezinkondlo Kazwelonke we-XXIII Ateneo de Alicante 2015 "Poet Vicente Mojica"
2 Umncintiswano Wezindaba Ezifushane ze-Gora Gasteiz (Spain)
3 Umncintiswano Wezincwadi we-XXII "i-Villa del Mayo Manchego"
4 Umncintiswano we-VIII Wezindaba Zezingane UFélix Pardo (Spain)
Umklomelo Wezinkondlo Kazwelonke we-XXIII Ateneo de Alicante 2015 "Poet Vicente Mojica"
Umklomelo: € 1000
Vula ku: Wonke umuntu angabamba iqhaza.
Ukuhlela ibhizinisi: Ateneo de Alicante
Izwe lebhizinisi lokushaya: Spain
Usuku lokuvala: 08/04/2015 (usalelwe amahora ambalwa, ufika ngesikhathi uma uhlala e-Alicante).
Ungathumela okungenani izinkondlo ezimbili. Zizokhululeka mahhala, okungenani zibe namavesi angama-300 futhi zizobhalwa ngeSpanishi.
Kumele zilethwe ngamathathu, zibhalwe ngomshini noma zibhalwe ngekhompyutha, zihlukaniswe kabili futhi zinhlangothi linye bese zithunyelwa kuleli kheli elilandelayo: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante, C / de las Navas, 32, DP 03001, Alicante, awunasibonakaliso nesiqubulo noma igama elingumbombayi, kufaka phakathi idatha yombhali ku-escrow ehlukile (igama nesibongo, ikheli, ucingo ne-imeyili -uma unayo) futhi kufaka nekhophi yekhophi kamazisi wakho kazwelonke. Kuyabikwa futhi ukuthi imvilophu yeposi akufanele ifake noma yiluphi uphawu noma imininingwane engakhomba umbhali ophikisanayo.
Imiklomelo yilena: Ateneo de Alicante 2015 Prize National "Poet Vicente Mojica", enikezwe i- € 1000, lapho kuzodonswa khona inani elihambisana nama-Tax Liens asebenzayo. Umklomelo Wesibili unikezwe i- € 450, nangaphansi kwezimo ezifanayo nalezi ezingenhla. Ukwamukela lo mklomelo kubandakanya ukudluliswa kwamalungelo omsebenzi onikiwe e-Ateneo de Alicante iminyaka emibili.
Umklomelo uzoklonyeliswa ngoLwesihlanu ngo-Ephreli 24, 2015.
Mina Umncintiswano we izindaba ezimfushane uGora Gasteiz (Spain)
Umklomelo: Izincwadi eziningi nokushicilelwa
Vula ku: Wonke umuntu angabamba iqhaza
Ukuhlela inhlangano: Gora Gasteiz
Usuku lokuvala: 10/04/2015
Izihloko ezibhaliwe: Izogxila kokwehlukahlukana, ukuhlangana ngamasiko ahlukahlukene, ukuhlangana, ubuningi, ukuhlala ndawonye, ​​ubumbano, ubulungiswa kwezenhlalo, amalungelo omphakathi, ukuvikelwa komphakathi noma imali engenayo eyisisekelo.
Indaba emincane kumele iqukathe, njengegama noma ingxenye yebinzana, "izan kolore" noma "Ngiyazi umbala".
Ukwelulwa kwezindaba ezincane kuzoba ne- Amagama ayi-150 aphezulu, ngaphandle kokubala isihloko, futhi singabhalwa ngesiBasque noma ngeSpanishi. Kuzokwamukelwa udaba olufushane olulodwa kumbhali ngamunye ngesiBasque nolunye ngeSpanishi.
Izothunyelwa ku- lehiaketa@goragasteiz.com ngesihloko esithi "Gora Gasteiz Short Story Contest". Indaba encane, kanye nedatha yombhali, kufanele ingene emzimbeni womyalezo. Kumele isayinwe ngegama mbumbulu.
Umklomelo uzomenyezelwa ngomhlaka-18 Ephreli.
Umncintiswano Wezincwadi we-XXII "i-Villa del Mayo Manchego"
Uhlobo: Indaba nezinkondlo
Umklomelo: ama-euro angama-200 nocingo lwesikhumbuzo
Kuvulekele wonke umuntu
Inhlangano ehlelayo: Indawo Yemikhosi kaMhlonishwa. UPedro Muñoz Town Hall
Usuku lokuvala: 10/04/15
Ohlelweni luka-XXII lalo mncintiswano kunezindlela ezimbili: Izinkondlo (umklomelo ka- "Alejandro Hernández Serrano") nendaba emfushane (umklomelo ka- "Domingo Martínez Falero").
Imisebenzi izokwethulwa kabili ngamakhophi ahlukene, ngefomethi ye-Word, ehlukaniswe kabili, kufonti ye- "Arial" nangosayizi we-12, ohlangothini olulodwa nangayo yonke imishado engu-2,5 cm, ifakiwe kanye nesihloko somsebenzi kusihloko sakho . Bazokwethulwa bephelezelwa impinda evaliwe enesihloko esifanayo, ngaphakathi kuzovela igama, izibongo, ikheli kanye nenombolo yocingo yombhali, kanye nekhophi yomazisi kazwelonke. Futhi i-Curita Vitae emfushane yombhali.
Izothunyelwa ngaphakathi i-Civic and Cultural Centre kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, kusukela ngo-11: 00 ekuseni kuya ku-14: 00 ntambama. Zingathunyelwa nangemeyili eqinisekisiwe kuleli kheli elilandelayo:
UMKHANDLU WEDolobhakazi lasePedro MUÑOZ
"Umncintiswano Wezincwadi Zase-Villa del Mayo Manchego"
I-Plaza de España nº 1 - 13.620 uPedro Muñoz (eCiudad Real)
Ukulethwa kwe- imiklomelo Kuzoba ngoMgqibelo 25 Apreli 2015, esenzweni esizokwenzeka eLa Plaza de Toros ngesikhathi sokufakwa kweZibopho kumaMayera ka-2015.
Umncintiswano we-VIII Wezindaba Zezingane UFélix Pardo (Spain)
Ubulili: Izingane nentsha
Umklomelo: € 700 kanye ne-plaque
Vula ku: akukho mingcele
Inhlangano ehlelayo: Cultural and Recreational Society (SCR) Clarín de Quintes (Villaviciosa-Asturias)
Usuku lokuvala: 12/04/2015
Izindaba kumele zibhalwe ngeSpanishi, be kuhloswe ezinganeni futhi ungashicilelwa.
Imisebenzi izokwethulwa iyimpinda nesihloko futhi isayinwe ngegama-mbumbulu kuphela, izohambisana nemvilophu evaliwe.
Ngaphandle kwemvilophu, igama elingelona iqiniso nesihloko sendaba kuzokhonjiswa.
Ngaphakathi kwemvilophu, imininingwane yombhali, igama nesibongo, i-ID, ikheli leposi, iposi, inombolo yocingo kanye nomsebenzi noma umsebenzi kuzofakwa, kanye ne-curriculum vitae emfushane (izigaba ezimbalwa ezichazayo, ezingekho ngaphezu kwengxenye yekhasi noma ngesimo se-curriculum vitae).
Imisebenzi izoba ne- ukunwetshwa okuphezulu kwamakhasi ayi-8 kanye nobuncane obungu-4, ebhalwe kuTimes New Roman, Body 12, Line Spacing 1,5.
Munye kuphela umklomelo onikezwe i- € 700 kanye ne-plaque yesikhumbuzo.
Lezi zindaba kufanele zithunyelwe ngeposi leposi (lezo ezitholwe ngeposi zizokhishwa kungakhathalekile imvelaphi yomlobi), kuleli kheli elilandelayo:
Ibhokisi Leposi elingunombolo 4 le-Villaviciosa (CP 33300), i-Asturias.
Imvilophu yeposi izobeka "Ngomncintiswano Wezindaba Zabantwana we-VIII Félix Pardo".
Ingabe lolu lwazi luwusizo kuwe? Ingabe uzohlanganyela kunoma yikuphi? Kusasa sizoshicilela esinye isihloko, kulokhu, ngemincintiswano yamazwe omhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Imincintiswano yezincwadi ka-Ephreli eSpain
Imincintiswano yezincwadi zomhlaba wonke ngo-Ephreli
Namuhla sikhumbula uPablo Neruda